ओखलढुंगाको चम्पादेवीमा भि’षण प’हिरो, गाम्नाङटारमा च’ट्याङ लागेर ४ वटा प’शुचौपाया ठ’हरै ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारओखलढुंगाको चम्पादेवीमा भि’षण प’हिरो, गाम्नाङटारमा च’ट्याङ लागेर ४ वटा प’शुचौपाया ठ’हरै !
ओखलढुंगाको चम्पादेवीमा भि’षण प’हिरो, गाम्नाङटारमा च’ट्याङ लागेर ४ वटा प’शुचौपाया ठ’हरै !
काठमाडौँ । ओखलढुंगाको चम्पादेवीमा वर्षासँगै प’हिरो जाँदा ८० लाख बराबरको क्ष’ति भएको छ । मा’नवीय क्ष’ति भने नभएको बताइएको छ ।स्थानीय सिल्खुबेसी भुमेथान खहरे भन्ने ठाउँमा शनिबार वर्षासँगै गएको पहिरोले चार वटा गाई र दुई वटा गोरु बगाएको छ ।
एउटा विद्यालय भवन, पाँच वटा घर, एउटा पसल र २० रोपनी खोतीयोग्य जमिन पुरिएको छ ।श्रीजलकन्या आधारभूत विद्यालय सिल्खुबेसीमा क्ष’ति पुगेको छ । सो विद्यालयमा पाँच कक्षासम्म प’ठनपाठन हुँदै आएको थियो ।एमालेका स्थानीय नेता शेरबहादुर मगरले दुःखको बेला सबैले मन खोलेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उता जिल्लाको लिखु गाउँपालिका ७ गाम्नाङटारमा आज (शनिबार) दिउँसो पानीसंगै परेको च’ट्याङ लागेर ४ वटा प’शुचौपाया म’रेका छन । दिउँसो करिब ३ बजेतिर पानी संगै परेको च’ट्याङ लागेर स्थानिय भोजबहादुर खत्रीले पा’लेको चौ’पाया म’रेका हुन ।
च’ट्याङबाट कुनै मा’नबिय क्ष’ति भने नभए पनि २ वटा भैँसी (एउटा लै’नो, एउटा ब्या’उने), एउटा गाई (ब्या’उन लागेको), र एउटा गोरु म’रेको हो । च’टयाङबाट अन्दाजी ३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको क्ष’ति भएको अनुमान गरिएको ७ नम्बर वडा अध्यक्ष बेदबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन ।
स्थानिय र प्रहरीले म’रेका चौ’पाया व्य’वस्थापन गर्ने काम गरेका थिए । घटना बारे जानकारी पाउनसाथ गाम्नाङटार प्रहरी चौ’कीबाट प्रहरी टोलि त्यसतर्फ ख’टाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका प्रहरी निरिक्षक शिव कट्टेलले जानकारी दिए ।